သမ္မတ ပူတင် စစ်သည်ပေါင်း တစ်သိန်းခွဲ နှင့် စစ် ဘက် ဆိုင် ရာ ယာဉ် များစွာကို အရေးပေါ်တပ်လှန့်မှု စစ်ရေး လေ့ကျင့်ရန် အမိန့်ပေး – The News Post
တိုက်ပွဲဝင် အသင့်ဖြစ်မှု အပေါ် စမ်းသပ်ဖို့အတွက် အရေးပေါ် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ကို ပြုလုပ်ဖို့ ရုရှားသမ္မတ ပူတင် က အမိန့်ပေးခဲ့တယ် လို့ ရုရှား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူ Sergei Shoigu က ပြောကြား ခဲ့ကြောင်း သိရှိ ရပါ တယ် ။
အဆိုပါ စမ်းသပ် တဲ့ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု မှာ စစ်သည်ပေါင်း ၁ သိန်းခွဲ၊ မြေပြင်သွား စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ယာဉ်ပေါင်း ၂၆၀၀၊ လေယာဉ် ၄၁၄ စီး၊ စစ်သင်္ဘော ၁၀၆ စီးတို့ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ၎င်း က ဆို ပါ တယ် ။
MOSCOW REGION, RUSSIA – JULY 8, 2020: Servicemen ofareconnaissance unit of the 2nd Guards Motor Rifle Division (Taman Division) prepare forafield training exercise at Alabino firing range. The drill gathers tank, motor rifle, artillery and reconnaissance units to mark the 80th birthday of the Taman Division, part ofaguards tank army of the Western Military District. Sergei Bobylev/TASS
Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Àëàáèíî. Ðàçâåäûâàòåëüíîå ïîäðàçäåëåíèå Òàìàíñêîé ìîòîñòðåëêîâîé äèâèçèè ïåðåä äåìîíñòðàöèåé íàâûêîâ ïî ïîëåâîé âûó÷êå íà ïîëèãîíå Àëàáèíî. Áîåâûå íàâûêè äåìîíñòðèðóþò òàíêîâûå, ìîòîñòðåëêîâûå, àðòèëëåðèéñêèå, ðàçâåäûâàòåëüíûå ïîäðàçäåëåíèÿ â ðàìêàõ îçíàìåíîâàíèÿ 80-ëåòèÿ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ Òàìàíñêîé ìîòîñòðåëêîâîé äèâèçèè, âõîäÿùåé â ñîñòàâ ãâàðäåéñêîé òàíêîâîé àðìèè Çàïàäíîãî âîåííîãî îêðóãà. Ñåðãåé Áîáûëåâ/ÒÀÑÑ
စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွက် မြေပြင်လေ့ကျင့်ရေး ကွင်းပေါင်း ၃၅ ခု သတ်မှတ် ထားပြီး၊ ရေတပ် လေ့ကျင့်မှု အတွက် ပင်လယ်နက် နဲ့ ကတ်စ်ပီယန်ပင်လယ်ထဲ မှာရှိတဲ့ နေရာပေါင်း ၁၇ နေရာ မှာ လေ့ကျင့်ဖို့ရည်ရွယ် သတ်မှတ်ထားတယ် လို့ သိရှိ ရပါတယ် ။
လေ့ကျင့်မှုမှာ အနောက်ဘက်စစ်နယ်ဝန်း ကိုအခြေပြုထားတဲ့ ကြည်း၊ရေ၊လေ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အသီးသီး ပါဝင် မှာဖြစ်ပြီး အဆိုပါ စစ်နယ်ဝန်းဟာ ယူကရိန်း၊ ဘီလာရုစ်၊ ဘဲလ်တစ်ပြည်နယ်များ၊ ဖင်လန်နဲ့ အာတိတ်ဒေသတွေလည်းဖြစ်ပါ တယ်။
ရုရှားကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး က စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း အစီအစဉ်တွေကိုအကောင် အထည်ဖော်ဖို့လည်း ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ထား ပါတ ယ်။
ယခုလေ့ကျင့်မှုရလဒ်ဟာ မဟာဗျူဟာ လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်တဲ့ Kavkaz-2020 [Caucasus-2020] အတွက် ပြင်ဆင်မှု အခြေအနေကို အကဲဖြတ်မယ့် ရလဒ်ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဝန်ကြီးကပြောဆိုခဲ့ ပါသေးတယ်။
ဒါ့အပြင် တောင်ပိုင်း စစ်နယ်ဝ န်းရဲ့ အမှတ် ၅၈ Combined Arms Armyဒုံးတပ်ဖွဲ့ဟာ နည်းဗျူဟာမြောက်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာပါဝင်ဖို့အတွက်Stavropol Territory ကိုချီတက်လာနေခဲ့ပြီဖြစ်တယ် လို့လည်း သိရှိရပါတယ်။ အဆိုပါတပ်ဖွဲ့မှာ Iskander-M operational-tactical missile system တွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါ တယ်။
Optreden in Verstedelijkt Gebied (OVG) ,Marnewaard, Zoutkamp.
Oefening waar eenheden van het korps mariniers, samen met eenheden van de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht aan deelnemen.
ထိုသို့သောအခြေအနေမှာ ယူကရိန်းနိုင်ငံအနေ နဲ့ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေတယ်လို့လည်း သိရှိရပါတယ် ။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ကြီးမားတဲ့ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ပြီး ကျူးကျော်လာနိုင်တယ် လို့ ခန့်မှန်းထားတာကြောင့်လည်းဖြစ် ပါတယ်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံခြားရေး ဒုဝန်ကြီးကတော့ ယူကရိန်းအနေ နဲ့ပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ဆင်ထား ရမှာဖြစ်တယ် လို့ ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရ ပါတယ် ။
ကိုဗစ် ကာ ကွယ်ေ ရး စံ ချိန် စံညွှန်း နဲ့ မ ညီ တဲ့ စာ သင်ေ ကျာ င်းေ တွ ကို ဖွင့်ခွ င့်ပြု မည် မဟုတ်